रथयात्रा झ’डपमा ढुंगा हा’न्ने युट्युबर प’क्राउ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/रथयात्रा झ’डपमा ढुंगा हा’न्ने युट्युबर प’क्राउ !
काठमाडौँ। बिहीबार मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वि’वादमा ढुंगा हान्ने युट्युबर प’क्राउ परेका छन्। उनलाई महानगरीय अ’पराध महाशाखाले इमाडोलबाट प’क्राउ परेको महाशाखा प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए। उनी युट्रयुबर हुन्। बिहीबार रथ तान्ने विषयमा वि’वाद हुँदा प्रहरी र स्थानीयबीच पुल्चोक क्षेत्रमा दिनभरिजसो नै झ’डप भएको थियो।
सुरुमा रथ तानिरहेका बेला प्रहरी हस्तक्षेप गरेर तितर वितर बनाएको भी’ड फेरि थप संख्यासहित रथ तान्न पुगेपछि पुल्चोक क्षेत्र रणमैदान जस्तै बनेको थियो। प्रहरीले भी’ड नियन्त्रण गर्न लाठी, अश्रुग्यास र पानीको फोहोराले प्र’हार गरेपछि जवाफमा स्थानीय नेवार समुदायका युवाहरुले ढुंगामुढा, गुलेलीले आ’क्रमण गरेका थिए।
प्रहरीमाथि घरको छत छतबाट समेत घरेलु वस्तुले आ’क्रमण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दोहोरो झ’डपका क्रममा आ’क्रोशित भी’डले प्रहरीमाथि सामूहिक आ’क्रमणसमेत गरेर ग’म्भीर घा’इते बनाएको छ भने प्र’र्दशनकारी तर्फ पनि केही घा’इते भएका छन्।